Bespoke Synth, ngwanrọ modular software ụda synthesizer | Site na Linux
Ọchịchịrị | 14/09/2021 23:59 | Emelitere ka 15/10/2021 03:14 | Aplicaciones
Mgbe afọ iri nke mmepe ọ bịara mara Nwepụta nke ụdị izizi mbụ nke ọrụ Bespoke Synth, na-amalite dị ka ihe nrụpụta ụda olu modul nke na -enye ohere iwepụta na hazie ụda dabere na ntụgharị ihu anya nke ụda na -aga n'etiti modulu dị iche iche na -etolite ma gbanwee ọdịdị nke ụda ụda, yana mmetụta superposition.
Aha ya bụ Synth bụ echiche onye nrụpụta Ryan Challinor. Ryan na -akọwa ya dị ka '' iji bọọlụ baseball jiri Ableton Live tụọ '' wee rịọ ya ka o tinye ya ọnụ, gbakwunyere na ọ dị mma ịmara na Bespoke Synth abụghị DAW na -ahụkarị ụzọ adịghị. Ọ bụ isi akwa akwa na -enye gị ohere ịmepụta usoro ọrụ nkeonwe gị.
Site na njirimara ngwa ahụ, ekwuru na enwere ike igbanwe gburugburu ebe na ofufe: ị nwere ike tinye ma gbanwee ọnụ na -akwụsịghị ịkpọgharị egwu.
Bespoke bụ ọrụ m bidoro na 2011 dị ka ụzọ isi mụtakwuo maka imepụta egwu. Kama itinye oge n'ịmụta ihe mgbagwoju anya nke DAW dị adị, emere m mmega ahụ na -enweghị isi iji nwalee nke m. Ngwanrọ a bụ nke mụ na nke m ahaziri nke ọma, ya mere aha a bụ "Bespoke".
Nzube Bespoke bụ ịkekọrịta ihe niile na modulu dị iche iche nke enwere ike itinye ọnụ na nhazi omenala, dị ka ngwaike modular. Emebere Bespoke ka ọ bụrụ nke ahaziri nke ọma, na -eche na ụdị ọ bụla omenala ị ga -emepụta ga -abụkwa 'bespoke' maka gị.
E wezụga ya enwere karịa modulu 190 maka imepụta ụda olu. Na-akwado njikọ nke plugins VST na-apụ apụ na imepụta ngwa ngwa nke ndị ọkwọ ụgbọ ala Python gị. A na -enye ngwaọrụ maka ijikọ ndị njikwa MIDI.
Ryan mepụtara ya maka onwe ya yana usoro ọrụ ya, mana ọ na -emepe ya onye ọ bụla Onye chọrọ ịnwale oghere Bespoke Synth efu. Ọ nwere ike ịdị ntakịrị n'ihi na ị nwere ntakịrị ihe ịga n'ihu mgbe ị na -agba ngwanrọ a.
Ị ga -amalite nyocha na ịnwale. Enwere ọrụ nlele ole na ole ị nwere ike bulite, mana ha anaghị agwa gị ọtụtụ ihe. Ọzọkwa, ihe mgbochi ụlọ niile adịghị ebe ahụ ma ọ bụ opekata mpe, ọ bụghị n'ụzọ ama ama. Naanị m na -etinye ọkara elekere iji chọta ihe nzacha naanị iji chọpụta na ọ nọ ebe ahụ dị ka akụkụ nke oscillator, yabụ na ọ gaghị eso iwu ị tụrụ anya ya.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na -ele anya nke ukwuu na oghere. Ọ masịrị m ka eriri ndị ahụ na -agafe na -esi eme ka eriri patch ahụ dị ndụ. Ọ na -agbagwoju anya ma na -atọkwa ụtọ ma jupụta n'ụdị ike ọ bụla ma ị nwee ike ịghọta ya. Nzọ gị kacha mma bụ ilele vidiyo Benn Jordan n'okpuru!
Bespoke Synth bụ isi mepere emepe yana nweere onwe ya kpamkpam ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya, n'agbanyeghị na webụsaịtị na -agba gị ume ịkwụ dollar ole na ole. iji nyere aka na akwụ ụgwọ, mana ọ bụ otu ụdị ahụ agbanyeghị. Ị kwesịrị ịnwale ya.
Uzo oru ngo a maka itinye ego na -adọrọ mmasị: na mgbakwunye na ụdị efu, a na -enye nhọrọ ịkwụ ụgwọ abụọ: ahaziri nke ọma ($ 5) na nke ahaziri pro ($ 15), nke bụ otu ihe na ụdị nke efu yana enweghị atụmatụ dị elu nke egosiri nke ọma na tebụl ntụnyere na saịtị (ọ pụtara, na ọ bụrụ na ọ masịrị mmemme ahụ, onye ọrụ nwere ike ịkwado ọrụ ahụ na -enweghị mmanye site na ịzụta ụdị akwụ ụgwọ).
Finalmente ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya gbasara oru ngo a, ị nwere ike lelee nkọwa ya na njikọ dị n'okpuru 1.
Banyere mkpokọta Bespoke Synth, nke a dị mfe ịme, ebe ọ bụ zuru ezu imepe ọnụ ma pịnye iwu na -esonụ:
Edere koodu oru ngo na C ++ ma kesaa ya n'okpuru ikikere GPLv3. Mgbakọ dị njikere maka Linux, macOS na Windows.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Bespoke Synth, onye na -emepụta ụda olu sọftụwia modular sọftụwia